Amụma ụwa ma ọ bụ icheku ọkụ, ihe ịtụnanya | Netwọk Mgbasa Ozi
Foto - Izu ụka-perfil.com
Dị ka a ga - asị na ọ bụ mmalite nke akụkọ ụjọ, n'oge ole na ole enwere ike ịhụ na mbara igwe ihe a maara dị ka ụzarị ma ọ bụ icheku ọkụ ụwa. Bọọlụ na-enwu gbaa nke na-eju onye ọ bụla hụrụ ya anya na ọ metụtara oke égbè eluigwe.
Ruo ogologo oge, a na-ewere ya dị ka akụkọ ifo, nro ma ọ bụ ngwaahịa sitere n'echiche ụfọdụ mmadụ. Ma ugbua ka amatara na bụ ihe dị adị n'ezie, ọ bụ ezie na amachaghị banyere ya.
Ọ bụ ezie na amatabeghị otu o si akpụ ya, ndị ọkachamara kwenyere na nke a ike nke na-eme ka egbukepụ egbukepụ na-ewepụta site na ngwakọta kemịkalụ nwayọ nwayọ. Iji gbalịa ịmatakwu ihe, ha anwaala ịmepụta ha na ụlọ nyocha, mana enweghị nsonaazụ doro anya.
Ihe a maara n'oge a bụ na n'oge ebili mmiri eletrik, ọ nwere ike ịbụ ikpe na ọ na-etolite. Ọ bụrụ na ọ na-eme Ọ nwere ike iwere ụdị dị iche iche: ovoid, spherical, teardrop or cane. Akụkụ ahụ nwekwara ike ịdịgasị iche nke ukwuu: n'etiti 10 na 40cm, yabụ ọ bụ ihe a na-ahụ anya nke na-abụghị otu ihe ị ga-ahụ site n'èzí dị ka akwụkwọ akụkọ sitere n'aka gị sofa.
Ọ bụ ezie na ọ na-adị sekọnd ole na ole, n'oge ahụ ọ nwere ike imebi ihe. N’abalị iri abụọ na otu nke mkpụrụ ụbọchị iri na asatọ, n’afọ 21, n’ime ihe akpọrọ ‘Oke Oké Ifufe’ otu n’ime ha bibiri ụlọ nke ụka San Pancracio, na ógbè nke Devon (England). N’akụkọ ihe mere eme anyị kachasị nso, a hụrụ otu n’ime Febụwarị 25, 2012, n’obodo Rosario (Argentina). Ebe ahụ, otu onye akaebe dara mgbawa nke otu n'ime ha mgbe ọ nọ na kichin nke ụlọ ya.
Nke a bụ ihe ịtụnanya na ọtụtụ mmadụ kemgbe afọ gara aga dọtara ndị nwere ọchichọ ịhụ ya. Ọ bụrụ na mmadụ emee dị nso n’ụlọ, nweere onwe gị ise foto ya: enwere nkọwa ole na ole edeturu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Àmụmà ma ọ bụ flash nke ụwa, ọ bụ obere ihe ọhụụ
Mgbanwe ihu igwe elu Antarctica